Miala amin’ireo olan’izao tontolo izao | Fondation des Choisis de Jésus
Miala amin’ireo olan’izao tontolo izao
1C_27: R’ilay Bitikako, ny hatongavana ho « Fitiavana » dia ny mifandray am-pitiavana akaiky Amiko mandrakariva, miala amin’ireo olan’izao tontolo izao. « Olan’izao tontolo izao » hoy tsara Aho…. Fa tsy niteny Aho hoe tsy mila miasa eo amin’izao tontolo izao ianao. Ny asa, dia ny fanehoana ny ataonao ety ivelany, fa kosa ny olana dia miantefa amin’ny fonao. Izaho, dia ny fonao no tiako ho Ahy manontolo. Andriamanitra Fitiavana Aho.